यि हुन् भारतका अटेर नायिकाहरु, जसले हत्तपत्त निर्देशकको कुरा मान्दैनन्, सुटिगंमा नै हुन्छ यस्तो सम्म – Khabar 27 Media
यि हुन् भारतका अटेर नायिकाहरु, जसले हत्तपत्त निर्देशकको कुरा मान्दैनन्, सुटिगंमा नै हुन्छ यस्तो सम्म
March 18, 2021 March 18, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on यि हुन् भारतका अटेर नायिकाहरु, जसले हत्तपत्त निर्देशकको कुरा मान्दैनन्, सुटिगंमा नै हुन्छ यस्तो सम्म
एजेन्सी – फिल्ममा निर्देशकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस्तो अभ्यास बलिउडमा त झनै बढी देखिन्छ । किनकि, बलिउड निर्देशकहरू फिल्मलाई आफ्नो हिसाबले पेस गर्न चाहन्छन् । जब कुनै स्टारले निर्देशकको आदेश मान्दैन र मनोमानी काम गर्छ तब स्टारलाई सम्झाउन निर्देशकलाई निकै अ प्ठ्या रो हुन्छ ।
यहि नमान्ने नायिकामा करिना कपुर पनि र्न आउछिन् । प्रकाश झा निर्देशित फिल्म ‘सत्याग्रह’को एक गीत ‘रससे भरे तेरा नैना’मा करिना कपुरले अभिनेता अजय देवगणलाई कि स गर्न इन्कार गरिदिएकी थिइन् ।
गीतको मागअनुसार भिडियोमा दुईले ‘इन्टिमेट सिन’ दिनुपर्ने थियो । तर, करिनाले त्यो कुरा सुनेरै ‘नाइँ’ भनेकी थिइन् । निर्देशकले जति भने पनि उनले उक्त सिन दिन मानेकी थिइनन् ।त्यस्तै सुन्दरी नायिका ऐश्वर्य राय बच्चनले पनि एक पटक निर्देशकको अ फर मानेकी थिइनन् ।
फिल्म ‘जोधा अकबर’को एक सिनमा ऋतिक र ऐश्वर्यले राजा–महाराजाले खाने खानालाई साँच्चै खानुपर्ने थियो । ती सबै परिकार विदेशी घ्युबाट बनाइको थियो । तर, ऐश्वर्यले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै ती परिकार खान अ स्वीका र गरेकी थिइन् । उनले खाना नखाइदिएपछि निर्देशक स क समा परेका थिए ।
यो पनि, सलमानसँग ‘ब्रे क अप’ पछि ऐश्वर्याले गु मा एकी थिइन् फिल्म-बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान र अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको प्रेमसम्बन्ध निकै चर्चामा रह्यो । लामो समयसम्म सम्बन्धमा रहेर विवाह गर्ने योजनामा रहेका सलमान र ऐश्वर्याको प्रेमकहानी अधुरै रह्यो । सलमानको रिसाहा, आक्रामक र ईश्र्यालु बानीले ऐश्वर्यासँग ब्रेकअप भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताउँदै आएका छन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनीहरुको सम्बन्धको अन्त्यतिर सलमान र ऐश्वर्याको बीचमा सार्वजनिक रुपमा नै झ ग डा परेको थियो । ‘चलते-चलते’ फिल्मको सेटमा सलमानले झ ग डा गरेका थिए । फिल्मको मुख्य भूमिकामा शाहरुख खानसँग पनि सलमान भि ड्न पुगेका थिए ।
जसको कारण फिल्मबाट ऐश्वर्यालाई निकालियो र रानी मुखर्जीलाई भित्र्याइयो । यति मात्र होइन सलमानसँग ब्रेकअपपछि ऐश्वर्याले थुप्रै ठूला फिल्महरुबाट हात धुन परेको थियो । कतिपय निर्देशक र निर्माताले आफ्नो फिल्ममा ऐश्वर्यालाई प्र ति ब न्ध लगाएका थिए ।
सलमानसँग ब्रेकअपपछि ऐश्वर्याले बलिउडमा टिकिरहनका लागि आफूभन्दा जुनियर अभिनेता विवेक ओबेरोय, अर्जुन रामपाल र प्रियांशु चटर्जीहरुसँग फिल्म खेलिन् ।
मन्दिरमा लगेर सुटुक्क शिल्पा संग बिहे गरेका अक्षयले आखिर रविना लाई नै किन अपनाए ?
July 10, 2021 Shyam Lama
आखिर कस्तो दुखमा छिन् आलिया, किन रोइन् लाइभ अन्तरवार्तामा नै डाँको छोडेर ? के रणविरले धोका दिए !
February 1, 2021 July 28, 2021 Shyam Lama
डेब्यू फिल्ममै सलमानभन्दा बढी थियो भाग्यश्रीको पारिश्रमिक
February 25, 2021 February 25, 2021 Shyam Lama